Jiri Akpa ego ịntanetị Google Pay Discover zụta Bitcoin | Paxful
Zụta Bitcoin (BTC) jiri Kwụọ ụgwọ Google
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Kwụọ ụgwọ Google taata.
Kwụọ ụgwọ site na
Ka e si azụta Bitcoin na Paxful
N’ebe a na Paxful, ebum n’uche anyị bụ ime ka ọrụ ego ruo ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa. Anyị chọrọ inye ndị mmadụ ohere ị mefu ego ebe ọ bụla ha hụrụ ma mee ka ndụ ha ka mma kwa ụbọchị.
Ikpo ọrụ anyị na arụ ọrụ site na ịsi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ, nke na enyere gị aka ịzụta Bitcoin kpọmkwem site na ndị ọrụ ndị ọzọ dịka gị, na enweghị itinye ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ị ga abụ otu na obodo nke ihe karịrị nde ndị ọrụ atọ, ndị niile bịakwutere anyị na ebumnuche nke ịchịkwa ego ha.
Ị zụta crypto na Paxful dị mfe; naanị soro nzọụkwụ ndị a:
Debanye aha – Mepụta akaụntụ ị ga akpaghị aka na ị ga enweta Akpa ego Bitcoin n'efu.
Chọọ otu ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa – Ozugbo inwere akaụntụ, họrọ usoro ịkwụ ụgwọ, ọnụego Bitcoin ị dị njikere ịzụta yana ego ịchọrọ, wee pịa Chọọ ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ndị ọzọChọgharịa na ndepụta nke ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa họrọ nke kachasị dabara na ihe ị chọrọ, ma nyochaa usoro ndị na ere ahịa.
Bido azụmahịa – Ọ bụrụ na afọ juru gị na usoro oree, tinye ego Bitcoin ịchọrọ ịzụta, wee bido ahia ahụ. Nke a ga emeghe mkparịtaụka ndụ gị na òreè . Soro ntuziaka nke òreè iji kwụọ ụgwọ ma kwenye ya.
Nata Bitcoin– Òreè ga ahapụ Bitcoin ozugbo na àkpa ego Paxful gị.
Ị nwekwara ike ile vidiyo mmata anyị etu esi azụta Bitcoin ozugbo.
Mgbe ịzuchara ahia nke ọma, ịnwere ike izipu ma ọ bụ mefuo Bitcoin na akpa ego ma ọ bụ ọrụ ọ bụla site na akpa ego Paxful gị.
N'ime usoro okwukwụgwọ karịrị 300 dị, ịzụta Bitcoin na ntanetị adịtụbeghị mfe. Site na ego na nnyefe ego na ụlọ akụ na kaadị onyinye na ngwa ịkwụ ụgwọ gasi, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ dabara adaba maka gị. Ọ bụrụ na ị nwere usoro ọkwụkwụụgwọ kacha mma nke ị na ahụghị, mee ka anyị mata na anyị ga agba mbọ ịme ya.
Zụọ ahịa ngwa ngwa, ma nwe chekwaa na ebe ahịa Bitcoin Paxful ndị ọgbọ na ọgbọ. Bido taa!